ခင် မောင် စိန်၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
ခင် မောင် စိန်
ခင် မောင် စိန်'s Apps
ခင် မောင် စိန်'s Likes
ခင် မောင် စိန်'s ၏မိတ်ဆွေများ
ခင် မောင် စိန်'s Groups
ခင် မောင် စိန် သည်လက်ဆောင်မရရှိသေးပါ။
ခင် မောင် စိန်၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ
phyuthi သည်ခင် မောင် စိန်ကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
ခင် မောင် စိန် liked kham's profile
ခင် မောင် စိန် liked လုံမငြိမ်းချမ်း's profile
ခင် မောင် စိန် liked thein wai's profile
ခင် မောင် စိန် သည်လုံမငြိမ်းချမ်း's ၏ '"မိန်းမသားမို့ အားနွဲ့ စရာလား"' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ခင် မောင် စိန် သည်nyansoe's ၏ 'မိစ္ဆာဒိဌိနှင့် ပဌာန်းပစ္စည်းတရား' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ခင် မောင် စိန် သည်nyansoe's ၏ 'ပါဏာတိပါတ နှင့် ပဌာန်းပစ္စည်းတရား' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ခင် မောင် စိန် သည်အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)'s ၏ 'အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)..သို့ ဘာသာခြားတစ်ယောက်မေးသော မေးခွန်း(၉)ချက်..နှင့်… အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)..၏ အဖြေများ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ခင် မောင် စိန် liked A BuddhismworldAdmin's discussion မေးဖလှယ်ကြရအောင်
ခင် မောင် စိန် liked Sai Lao Kham's discussion မည်သည့်အခါ သာသနာတော် ကွယ်ရပါသလဲ။
ခင် မောင် စိန် သည်♣တောသူမလေး♣'s ၏ 'ငရဲသို့သွား ငရဲသားဖြစ်ရပါလို၏ မည်မျှဆိုဆို' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ခင် မောင် စိန် သည် A BuddhismworldAdmin's ၏ 'မေတ္တာပို့ ရန်နေရာ' အဖွဲ့တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"အားကြီးတဲ့ စေတနာ ဖြူစင် နှလုံးသားဖြင့် လှူ ဒါန်းကြသူတွေ မြတ်ဒါနကြောင့် ဘဝစိုပြေ ရိက္ခာအပြည်နဲ့သိက္ခာရှိသူတွေဖြစ်ကြပါစေဗျား သာဓု သာဓု သာဓု ပါ ကွယ်"
"May all beings in suffering be liberated from suffering. May all beings in danger be liberated from danger. May all beings in sorrow be liberated from sorrow."
ခင် မောင် စိန် joined A BuddhismworldAdmin's group
9:39pm အချိန်အောက်တိုဘာ 11, 2015, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
10:45pm အချိန်အောက်တိုဘာ 11, 2014, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
5:07pm အချိန်ဇန်န၀ါရီ 22, 2013, တွင် ♣တောသူမလေး♣ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
11:20pm အချိန်ဇန်န၀ါရီ 21, 2013, တွင် သဒ္ဓါဖြူ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။